Semalt: Ukulwa nokugwema ama-imeyili ogaxekile
Njalo ukuhlangana kwe-intanethi kuhlaselwa ukuhlaselwa kogaxekile. Iningi labantu abasebenzisa iwebhunsuku zonke ubhekana nama-imeyli amaningi athi anikeze isevisi ethile. Ama-Spammers ahlose amaphaneli angaphezulu we-website, kanye nokuningiolunye ulwazi oluwusizo. Esikhathini esedlule, abagaxekile bathathe amaphasiwedi amaningi womsebenzisi nolwazi lomuntu siqu, kanye nezinye izici ezihlukileyokuqinisekisa ukuthi iwebhusayithi isebenza ngendlela efanele. Bangakwazi futhi ukuletha i-e-commerce phansi, okuholela ekulahlekelweni okukhulu kwe-e-commerce. Zonke i-SEOimizamo ingadala ngenxa yokuhlaselwa kogaxekile kwangempela.
Ukuhlala kude nogaxekile kungaba umqondo ohlakaniphile ikakhulukazi kuwebhusayithi entsha. AbaphathiUmphathi Wempumelelo Yekhasimende i-Semalt ,UJack Miller, uchaza izindlela ezithile zokulwa nokuhamba ugaxekile:
1. Sebenzisa ikheli le-imeyili eliphephile
Izinyathelo zokuphepha umhlinzeki wakho we-intanethi ayenayo zibalulekile.Ngokwesibonelo, bangenza abasebenzisi bahlukane nemikhuba yokukhwabanisa noma bathuthukise umsebenzi wogaxekile. Kubalulekile ukucabangela ukusebenzisa okuphephileikheli le-imeyili. I-Gmail ne-Outlook inamanye amakheli e-imeyili aphephile kakhulu namuhla. Amanye amacala angaqinisekisa ukuvikelwa kweikhompyutha usebenzisa izindlela zakamuva zokuvikela i-spyware.
2. Gcina ikheli lakho le-imeyili liphephile
Wonke ugaxekile uqala ngokwenza iqoqo lamakheli amaningi e-imeyili..Lezi iziizinhloso abazisebenzisayo ukuhlaselwa kogaxekile. Kunezinqubo ezahlukene ze-IT zokusebenzisana nokuhlunga ugaxekile. Ungasebenzisa i-imeyili ehlukileamakheli wezinhlelo zokusebenza ezihlukahlukene ze-inthanethi. Ngaphezu kwalokho, kukhona njalo okukhethwa kukho kokufaka amafolda amaningi ekhelini lakho le-imeyili.Lesi silinganiso singagcina ama-imeyli ogaxekile kufolda ongayibona kalula, futhi ungawafaki nge-imeyili ebalulekile.
3. Sebenzisa izihlungi zogaxekile
Kuvela phezulu, kubalulekile ukusebenzisa ispredishithi ye-imeyli evikelekile. I-imeyiliAbahlinzeki abanjenge-Gmail baqukethe izihlungi zogaxekile ezingahlunga ezinye zokuhlaselwa okuphambili kogaxekile. Izihlungi ze-Spa zithola futhi zishaye ama-imeyili okuyiwonaugaxekile kufolda yogaxekile, lapho ungakwazi khona ukuhlonza ukuthi ubani ongakhonza kuwe.
4. Ungachofozi izixhumanisi kugaxekile
Kule mbono, kucacile ukuthi ama-imeyili ogaxekile aqukethe ama-URL amaningi ahlukileimisebenzi. Yonke le misebenzi ivela kubantu abanjengobaduni, abanemigomo engabaza ngemuva kokuhlaselwa kwama-imeyili amaningi. Ama-imeyli ogaxekileliqukethe izixhumanisi ezikhomba ezizindeni ezinonya. Bangakwazi ukufeza imisebenzi ethile ye-Hack njengokubheka isiphequluli sesisulukudivayisi ye-Linux eyi-remote hacking.
Kunezinhlobo eziningi zogaxekile phezu kwewebhu. Abasebenzisi abaningi be-inthanethi bahlangabezana nogaxekile kuimisebenzi yabo yansuku zonke. Ama-imeyili aqukethe ogaxekile avela kubantu abanamanye izinhloso ezinonya nokugula ngemuva kwalabo abahlukunyeziwe.Ugaxekile uletha izinkulungwane zemali kubasebenzisi abangenacala be-intanethi. Ukuyeka kude nogaxekile kungalondoloza i-e-commerce yakho ukuzinza kwayo kanyeukuphepha komuntu siqu kwedatha yekhasimende. Ezinye zezindlela zokulwa nokugwema ugaxekile kulezi ziqondiso. Ungakwazi ukulawulawena kanye nokuphepha kwewebhusayithi yakho kusuka kugaxekile. Ungakwazi futhi ukugcina ugaxekile kude nesayithi lakho noma amaklayenti.